Maitiro eBenchmark Yako Amazon Kushambadzira Akaunti | Martech Zone
Iko kune kazhinji nguva dzatinoshamisika, sevashambadziri, mashandisiro edu kushambadzira ari kuita mukuenzaniswa nevamwe vashambadzi muindasitiri yedu kana kuyambuka chakanangana chiteshi. Benchmark masisitimu akagadzirwa nekuda kwechikonzero ichi - uye maSellics aburitsa bhenji remahara bhenji reako Amazon Kushambadzira Akaunti kuenzanisa kuita kwako kune vamwe.
Kushambadzira kweAmazon kunopa nzira dzevashambadziri dzekuvandudza kuoneka kune vatengi kuti vawane, vatarise, uye vatenge zvigadzirwa uye zvigadzirwa. Zvishambadziro zveAmazon zvemadhijitari zvinogona kuve chero musanganiswa wemavara, mufananidzo, kana vhidhiyo, uye zvionekwe kwese kwese kubva kumawebhusaiti kuenda kune vezvenhau nekushambadzira zvemukati.
Amazon kushambadzira inopa mikana yakawanda yekushambadzira, inosanganisira:
Sponsored Brands - mutengo-wega-watinya (CPC) kushambadza iyo inoratidza yako brand logo, yetsika musoro wenyaya, uye akawanda zvigadzirwa. Aya ma ads anowanikwa mune akakodzera ekutenga mhedzisiro uye anobatsira kutyaira kuwanikwa kweako brand pakati pevatengi vanotenga zvigadzirwa senge yako.
Zvigadzirwa Zvakatsigirwa - mutengo-wega-watinya (CPC) kushambadzira inosimudzira yega zvigadzirwa zvinyorwa paAmazon. Zvigadzirwa zvinotsigirwa zvinobatsira kusimudzira kuoneka kwezvimwe zvigadzirwa nezvishambadziro zvinoonekwa mune zvekutsvaga uye pamapeji echigadzirwa
Inotsigirwa Ratidza - yekuzvimiririra-kuratidza kuratidza kushambadzira mhinduro iyo inokubatsira iwe kukura rako bhizinesi uye zita kuAmazon nekuita vatengesi parwendo rwekutenga, on uye off Amazon.
Iwe unogona kuwana ruzivo rwakakosha nekumaka yako Amazon kushambadzira kuita nevamwe mune yako indasitiri. Iyo Sellics Benchmarker inoongorora mashandiro ako muSponsored Zvigadzirwa, Sponsored Brands, uye Sponsored Ratidza uye inokuratidza chaizvo kwauri kuita kukuru uye kwaunogona kugadzirisa.
Makiyi ekuenzanisa mabhenji metric ayo akaenzaniswa ndeaya:
Mafomu Ekutsigira Iwe unoshandisa ese akakodzera mafomati anofanirwa kupihwa neAmazon? Imwe neimwe ine nzira dzayo dzakasiyana nemikana. Ongorora Sponsored Zvigadzirwa, Sponsored Brands & Inotsigirwa Ratidza
Chikamu chakazara: Nzwisisa kana iwe uri wepamusoro 20% - kana pasi
Enzanisa Kushambadzira mutengo wekutengesa (ACOS): Ndeipi muzana yezvekutengesa chaiko iwe yawakagadzira kubva kune yakatsigirwa kushambadzira mishandirapamwe uchienzanisa neyemukati mushambadzi? Iwe unochengetedza zvakanyanya here? Nzwisisa simba rekubatsira muchikamu chako
Benchmark Yako Mari NeKudzvanya (CP) C: Marii yakadii vamwe vari kubhadhara imwechete kubaya? Dzidza maitiro ekuwana iwo akakwana bhidha
Kukura Kwako Kudzvanya-Kuburikidza Rate (CTR): Mafomu ako ekushambadza anokunda musika? Kana zvisiri, dzidza maitiro ekuwedzera mikana yekutora bhatani
Natsiridza Amazon Kutendeuka Rate (CVR): Vanokurumidza sei vatengi kupedzisa chaiwo matanho mushure mekubaya pane kushambadzira. Zvigadzirwa zvako zvakatengwa kupfuura vamwe here? Dzidza kurova musika & kugonesa vatengi
Iyo Sellics Benchmarker dhata yakavakirwa pane yemukati maSellics kudzidza pamwe nesampuli inomiririra pamusoro pe $ 2.5b mune yakaunganidzwa yegore yeAmazon inonzi ad mari. Chidzidzo ichi parizvino chakavakirwa paQ2 2020 dhata uye ichagadziriswa nguva zhinji. Nzvimbo yega yega yemusika, indasitiri, sumbu remafomati rinosanganisira angangoita makumi maviri emhando dzakasiyana Majeji ari hunyanzvi hwepakati manhamba ekuverengera vanotengesa kunze.
Benchmark Yako Amazon Kushambadzira Akaunti
Amazon Kushambadzira Benchmark Report Demo
Disiki: Ini ndiri mubatanidzwa we Sellics.
Tags: amazon kushambadziraAmazon Inotsigirwa MhandoAmazon Inotsigirwa Zvigadzirwavatengesi